Ciidamada booliska countiga isiolo oo wali baacsanaya burcad wiil yar oo arday dishay | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Ciidamada booliska countiga isiolo oo wali baacsanaya burcad wiil yar oo arday dishay
Ciidamada booliska ee ka hawl gala countiga isiolo ayaa sheegay inay wali wadaan baacsiga burcad aan heybtooda la aqoonin oo maalintii khamiistii toogasho kudilay wiil 13 sano jir ah oo arday ahaa.
wiilka yar ayaa ladilay xili uu kasoo labtay skuulka isla markaana uu kusii jeeday xaafadooda maisha bora estate ee magaalada isiolo.
meydka ardeygan oo wax kadhiganjiray fasalka 7 aad ee dugsiga hoose dhexe ayaa waxaa heshay hooyadiis oo ku aragtay beer galeyda lagu abuuro.
laamaha amaanka countiga isiolo ayaa sheegay in meydka wiilka yar ay ka muuqdeen rasaas madaxa looga dhuftay.
Booliska ayaa sheegay inay baaritaano kuhayaan dhacdadan , inkastoo aysan jirion wali cid loosoo qabtay falkaasi oo kamid ah dhacdooyinka amni darrada ah ee mararka qaar kadhaca qaybo kamid ah countiga isiolo.